Samachar Link - News and Entertainment
By Pann PhuuPosted on May 16, 2022
မ မူ နူင့် မြတ်ကျော် တို့ မှာ တယောက်နူင့် တယောက် သာ ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ကြတာ၊ ပါးစပ် အပြော အဆိုက တော်တော် ပွင့်လင်း နေကြပြီဖြစ်သည်။ နေခင်း ဘက် ဆိုရင် […]
သာ ယာကြည်လင်တဲ့ မနက်ခင်းလေး ရဲ့ အေးမြတဲ့လေညင်း လေးတွေနဲ့အတူ သားသား တစ်ယောက် နိုးထလာခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ဆိုရင် ဒီအိမ်ကိုပြောင်း လာတာတ စ်ပတ်တိတိရှိပြီလေ။ ဖေဖေရယ်မေမေရယ် တစ်ခန်း ကျွန်တော်ကတစ်ခန်း၊ မမနဲ့ညီမလေးကတော့ ကျွန်တော့်ဘေးက အခန်းမှာပေါ့။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ […]
By Pann PhuuPosted on May 14, 2022
အ သက် ၃၀ ကျော် တ လင်ကွာ။ စိတ်ကုန် ၍ နောက်ထပ် မယူတော့ဘူးလို့ စိတ် ကူးထားသူဖြစ်သည်။ နေ့စဉ် သူမ အိမ်နီးချင်း အန်တီကြီးအိမ်မှာ ဆေး လိပ် လိပ် ရင်း […]
By Pann PhuuPosted on May 8, 2022
မင်း က လဲ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ကွန်ပြူတာရှေ့က မထတော့ဘူး ကျောင်း မသွားသေး ဘူးလား သွားမှာ ပါ ဗျာ ဘာလုပ် မလို့လဲ မင်းအမေ ကော ဈေးသွား တယ် အန်တီခိုင် […]
By Pann PhuuPosted on May 5, 2022
ကျ မ တို့ အိမ်ကို ဦးထွတ်ခေါင် အလည် လာပါ တယ်။ ကျမတို့ အိမ်မှာက ကျမရယ်၊ ကျမ ယောက်ျား ရယ်၊ သားရယ် ၃ယောက် နေကြတာပါ။ ဦးထွတ်ခေါင်က ကျမ ယောက်ျားရဲ့ […]
By adminsPosted on May 4, 2022
By Pann PhuuPosted on May 3, 2022 May 4, 2022
ဆ ရာ မ နှင်းနှင်း က အိမ်ထောင် သယ် ဒါပေမဲ့ သူ့ယောက်ကျား အဝေးမှာ သူကသူ့သား နဲ့နေတယ် သူ့ယောက်ကျားက တလတခါတောင် ပြန်လာချင်မှ လာတာ။ ဆရာမ နှင်းနှင်း က အသက်က […]
By Pann PhuuPosted on April 29, 2022 May 4, 2022
မှောင် မိုက်နေသော ကောင်းကင်ပြင် ထက် မှာ ကြယ်ရောင် တချို့က စိန်ပွင့်လေးများ ကြဲပက်ထား သကဲ့သို့ တလက်လက်ဖြင့် လင်းတခါမှိန်တလှဲ့ ဖြင့် သူတို့ တတ်နိုင်သော အလင်းကလေးဖြင့် ကမ္ဘာမြေထက် သို့ လင်းချပေးနေသည်။ ပူလောင်ပြင်းပြသော […]
By Pann PhuuPosted on April 28, 2022 May 4, 2022
၃ လ ပိုင်း ၂၅ရက်နေ့၂၀၁၇ နေ့လယ် ၂နာရီ ၅၈မိနစ် တွင်စတင် ဇာတ်လမ်းအကောင် အထည် ဖော်သည် မထွေး တစ်ယောက် နိုင်ငံခြားမှ ပြန်လာပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်အဆက်အပေါက်များ ပိုမိုထွား လာသည် ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးအောက်မှ လုံးထွားဝိုင်းနေသော […]
By Pann PhuuPosted on April 20, 2022 May 4, 2022
တခြားယောကျာင်္း တွေတော့ မသိ ကျနော်ကတော့ မိန်းမရမယ် ဆိုရင် အပျိုထက် အိမ်ထောင်သည် မိန်းမ သို့မဟုတ် တစ်ခုလပ်မိန်းမတွေကို ရတာပိုကြိုက်တယ်ဗျာ။ အပျိုရဲ့…ကကျဉ်းတော့ တဲ့အခါကျဉ်းကျပ်တဲ့အတွက် အရသာပိုကောင်းတာတော့ မှန်တယ် သို့သော်..အိမ်ထောင်သည်မိန်းမတွေကိုသလို စိတ်ထင်တိုင်းဆောင့်ဆောင့်???လို့မရဘူးလေ အဲ့လိုစိတ်ထင်တိုင်းဆောင့်ဆောင့်မ???ရပဲ ညင်ညင်သာသာလေးပဲလိုးပေးရတာ […]
© 2022. Samachar Link. Power by Pan Phuu Lay Myar